पुरुषको तुलनामा महिलामा किन लामो समयसम्म रहन्छ डण्डीफोर ? पुरुषको तुलनामा महिलामा किन लामो समयसम्म रहन्छ डण्डीफोर ? Canada Nepal
पुरुषको तुलनामा महिलामा किन लामो समयसम्म रहन्छ डण्डीफोर ?
क्यानाडानेपाल चैत्र २० २०७७
काठमाडौं । डण्डीफोर छाला सम्बन्धि हुने सबैभन्दा सामान्य तर सबैभन्दा तनाव दिने समस्या हो । किनभने यो प्रत्यक्ष मानिसको सौन्दर्यतासँग जोडिएको हुन्छ। डण्डीफोरको परिभाषा छुट्टा छुट्टै हुन्छन् तर चिकित्सा भाषामा अथवा ग्रीक भाषामा यसलाई एक्नी भनिन्छ, चाहे त्यो ठुलो डण्डीफोर होस् वा सानो विमिरा होस्। र एक्नी पनि किसिम किसिमका हुन्छन्। इन्फ्लामेटरी र ननइन्फ्लामेटरी एक्नी हुन्छन्।
ननइन्फ्लामेटरी एक्नीमा वाइट हेड्स आउने, ब्ल्याक हेड्स आउने र इन्फ्लामेटरी एक्नीमा ससाना दाना आउने, पिप जस्तो जम्मा हुने गरेको छाला तथा सौन्दर्य विशेषज्ञ डा. ललन खतिवडाले जानकारी दिए। यो समस्या १२ देखि १३ वर्षको उमेर समूहबाट देखि सुरु हुन्छ, अर्थात् यो समस्या विशेषतया किशोर अवस्थामा देखिने समस्या हो।
यस उमेरमा एस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोन जस्ता हार्मोनहरू घढबढ हुने प्रक्रिया तिब्र हुने हुँदा अनुहारमा चिल्लोपन वा तेल निष्काशित गर्ने ग्रन्थीहरु पनि सक्रिय हुने डा. खतिवडाले क्यानडानेपाललाई जानकारी दिए।
यतिबेला शारीरिक अंगहरुको विकास र शारीरिक रुपमा पनि परिवर्तन देखिने हुँदा यसबेला डण्डीफोरले सताउन सुरु गर्छ । विशेषगरी, डण्डीफोर किशोर अवस्थामा आउने गरेको पाइएको छ। किशोर अवस्थामा हर्मोन्सहरुको बढी सक्रियता भएका कारण चिल्लोपन बढी निस्कासित हुने भएकाले यो अवस्थामा बढी आउने गर्दछ। र उमेर बढ्दै गएपछि डण्डीफोर पनि हराउँदै जान्छ।
तर, कसैकसैलाई यो वंशाणुगत भएकाले नजान पनि सक्छ। यसैगरी, पुरुषहरुमा चाडै हराएपनि कसै कसै महिलामा लामो समयसम्म रहनसक्छ। यस्ता महिलामा पिसीओयस सिन्ड्रोम देखिने भएकाले लामो समयसम्म महिलामा डण्डीफोर देखिन सक्छ। अर्थात्, पिसीओयस सिन्ड्रोम भनेको यस्तो अवस्था हो, जसले महिलाको हर्मोनहरुलाई गडबड गर्न सक्छ।
कुनैपनि महिलालाई यो अवस्था भएको छ भने सामान्य भन्दा बढी हर्मोन उत्पादन हुन्छ र हर्मोन अत्याधिकमात्रमा उत्पादन हुने बित्तिकै डण्डीफोर आउने र लामो समयसम्म रहने डा. खतिवडा बताउँछन्। पीसीओएसले महिलाको अण्डाशयलाई असर गर्छ । प्रजनन अंगहरूले एस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोन उत्पादन गर्छन् । जसले मासिक धर्मको चक्र नियमित गर्दछ।
त्यसैगरी, अंडाशयले एन्ड्रोजेन भनिने पुरुष हार्मोनको पनि थोरै मात्रा उत्पादन गर्दछ। पीसीओएस एक “सिन्ड्रोम,“ वा लक्षणहरूको समूह हो जसले अंडाशय र ओभुलेशनलाई असर गर्दछ।
चैत्र २०, २०७७ शुक्रवार १४:२३:३१ बजे : प्रकाशित
दूधसँग नखानुहोस् यी खानेकुरा, देखिन्छ यस्तो समस्या
काठमाडौं । दूध एक पोषक तत्वयुक्त तरल पदार्थ हो । दूध बच्चादेखि बुढा उमेरका समूहका लागि फाइदाजनक मानिन्छ । प्रशस्त पोषक तत्व पाइने दूध शरिरलाई धेरै रोगबाट बचाउन मद्दत गर्छ । उसमा क्याल्सियम, म्याग्नेसियम र भिटामिन प्रशस्त पाइन्छ ।
शरिरलाई स्वस्थ राख्न दूध पिउनु राम्रो हुन्छ । तर केही यस्ता खानेकुरा छन्, जुनसँग दूधसँगै खान हुँदैन । हामिले दूधसँग मिलाएर केही यस्ता खाने खानेकुरा खाएमा शरिरमा विभिन्न समस्याहरु हुन सक्छन् ।
कागती पनि - दूध खाएको समयमा कागती पानी पिउनु हुँदैन । सुन्तला, अंगुर र कागती जस्ता अमिला चिजहरुसँग दूध पिउँदा शरिरमा समस्या हुन्छ । प्ेटमा अम्लीय पदार्थले दूधलाई फटाइदिन्छ र विषालु पदार्थ उत्पन्न हुन्छ । जसले रुघाखोकी, कफ र एलर्जीको समस्या हुन सक्छ ।
नुन र करेला - दूधसँग नुन र करेला पनि खानुहुँदैन । नूनिलो खानेकुरासँग दूध खाँदा तत्काल समस्या नदेखिएपनि पछि समस्या देखा पर्न सक्छ ।
माछा - दूधसँग माछा पनि खानुहुँदैन । माछा खाएपछि दूध पिउँदा पेटमा अम्ल उत्पन्न भई पेट दुख्ने लगायत विभिन्न समस्या हुन्छ ।
फल - दूधसँग तुरुन्तै कुनै फल पनि खानुहुँदैन । दूध खाएपछि तत्कालै फल खाँदा पेटमा समस्या हुन सक्छ ।
मासु - दूधसँग मासु खान नहुने कुरा पनि धेरैलाई थाहाँ छ । यी दुवै एकैचोटी खाँदा पेटमा समस्या हुन्छ । पचाउन मुश्किल पर्छ । एसीडीटीको समस्या हुन्छ ।
खन्य खानेकुरा - यस्तै खाना खाने समयमा कालो दाल खाँदै हुनुहुन्छ भने दूध नपिउनुहोस् । तातो दुध सुत्नु भन्दा अघि पनि खानुहुदैन । दुध र दही पनि एकैपटक पिउनुहुँदैन । यसले छालाको रोग लाग्ने सम्भावना हुन्छ ।
चैत्र २९, २०७७ आइतवार २१:४०:०३ बजे : प्रकाशित
काँक्रो प्राणघातक क्यान्सरको लागि उपयोगी
काठमाडौँ। सलाद तथा अचारको रूपमा प्रयोग गरिने काँक्रो रसिलो हुनेगर्छ । काँक्रोमा भिटामिन सी, पोटासियम, फोलिक एसिड प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। यसबाहेक कार्बोहाइड्रेट, क्याल्सियम, फोस्फोरस, फलाम, सल्फर प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसमा पानीको मात्रा झण्डै ९४ देखि ९६ प्रतिशतसम्मा हुन्छ। काँक्रो माग गर्मी मौसममा बढी हुन्छ ।
काँक्रोको उत्पति नेपाल र भारतको दक्षिण पूर्वी भागमा भएको मानिन्छ। । काँक्रो खानमा जति स्वादिलो हुन्छ, स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि यो उत्तिकै लाभकारी हुन्छ । नियमित रूपमा काँक्रो खाँदा स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक हुने विज्ञहरू ठान्दछन्। काँक्रोले शीतलता प्रदान गर्ने भएकाले पनि यसको प्रयोग गर्मी मौसममा बढी गरिन्छ।
काँक्रोले फियो र पाचनथैलीलाई कमजोर हुनबाट बचाउनुका साथै मुटु, कलेजो र रक्त नलीको रोग लागेका व्यक्तिहरुमा पनि प्रभावकारी ढंगले काम गर्दछ। यसैगरी, उच्चरक्तचाप भएकाले पनि काँक्राको नियमित सेवन गर्दा फाइदा हुने गर्दछ।
यदि विषादी नभएका काँक्रोहरू छन् भने तिनलाई सफा पानीमा १५ मिनेटसम्म राखेपछि खानु राम्रो हुन्छ। त्यसैगरी, बजार वा हाटमा किनिएका काँक्रोहरू छन् भने तिनीहरूको बोक्रालाई निकालेर खान राम्रो हुन्छन् ।
काँक्रोले अनुहारको छालालाई चमकदार बनाउँछ । काँक्रोको रस तथा कागतीको रस मिलाएर अनुहारमा लगाउनाले अनुहारलाई चम्किलो बनाउँछ । त्यसैगरी, यसलाई काटेर पातलो पत्र बनाएर अनुहारमा लगाउँदा छालालाई स्वस्थ बनाउन मद्दत गर्छ ।
काँक्राको गोलाकार पारेर टुक्रा बनाइ आँखामाथि केहीबेर राख्नाले आँखाको स्वास्थ्य राम्रो हुनुका साथै डार्क सर्कल पनि ठीक हुन्छ । महिनावारी अनियमित तथा गडबडी भएका बेला पनि काँक्रोको सेवन लाभदायक हुन्छ। यसको लागि काँक्रालाई टुक्रा बनाइ त्यसमा दहि पुदिना, मरिच, बिरे नून, जिरा तथा हिंग मिलाएर खानुहोस् , त्यसले महिनावारीलाई नियमित बनाउनुका साथै महिनावारीका बेला हुने दुखाई पनि कम गर्छ ।
काँक्राका अन्य फाइदा
– तौल घटाउन मद्दत गर्ने
– पाचन प्रणालीलाई मजबुद बनाउँछ
– कब्जियतको समस्याबाट बचाउने
– काँक्रा र गाँजरको रस पिउँदा कपाल सुन्दर हुनुका साथै कपाल चम्किलो र लामो हुन्छ।
– मधुमेहका बिरामीहरुका लागि फाइदाजनक
– काँक्रोको नियमित सेवनले कोलेस्टेरोलको मात्रा सन्तुलित राख्दछ।
– प्राणघातक रोग क्यान्सरको लागि पनि उपयोगी
– उच्च रक्तचाप भएका बिरामीहरुका लागि पनि फाइदाजनक
चैत्र २९, २०७७ आइतवार १९:२१:४४ बजे : प्रकाशित
फिस्टुला कस्तो रोग हो, यसका रोगीले के खाने के नखाने ?
काठमाडौँ। फिस्टुला महिलालाई हुने एक धेरै पीडादायी रोग हो । फिस्टुला शरीरको कुनै पनि भित्री अङ्गमा पर्ने अनावश्यक प्वाल हो। महिलाहरूमा हुने अब्स्टे्रटिक फिस्टुला बच्चा पाउँदाको जटिलता वा यौन हिंसाका कारण हुने गर्दछ। लामो प्रसव व्यथामा महिलाहरूको योनी र पिसाब थैली वा मलाशयका कोशिकाहरू बच्चाको दबाबले थिचिएर रक्तसञ्चार अवरुद्ध भई मर्छन्, र तिनमा प्वाल पर्छ र त्यसबाट पिसाब वा दिसा अनियन्त्रित रूपमा बाहिर निस्कन्छ।
फ्रान्सका डा. हुवर्ड भन्छन्, “बच्चा जन्मने बेलामा लामो समय व्यथा लाग्यो र तोकिएको मितिभन्दा ढिलो बच्चा जन्मियो वा अप्रेसन गरेर निकाल्दा आमाको पिसाब नलीमा प्वाल प¥यो भने यस्तो समस्या आउँछ।”
समयमा उपचार भएन भने फिस्टुलाबाट जटिल सङ्क्रमण, अल्सर, मिर्गौला रोग, खुट्टाको स्नायु प्रणालीमा अवरोध जस्ता थप समस्या उत्पन्न हुनसक्छन्। यो गुप्तांगमा हुने रोग हुनाले प्रायः महिलाहरुले आफन्त वा विशेषज्ञसँग परामर्श लिन हिचकिचाउने गर्छन।
फिस्टुला बिरामीले के खाने ?
अन्नमा – पुरानो चामल, गहुँ, जौ
दालमा – रहरी, मूँग दाल, मुसुरो
फलफूल र तरकारीहरूमा – हरियो सागशब्जी, लौका, मेवा, पर्वल, तिते करेला, फर्सी, मौसमी फलफुल, बेथुको साग, लट्टेको साग, अम्बा, केरा, स्याउ, अमला, काँक्रो, मुलाको पात, मेथीको साग, तरुल र अन्य रेशादार सागशब्जी।
अन्यः हल्का भोजन, शुद्ध घ्यु, बिरे नुन, र अत्याधिक पानी पिउने बानी बसाउनु पर्छ।
अन्नः मैदा, नयाँ चामल
दालः मटर, कालो दाल, चना दाल
फल र तरकारीहरूः आलु, क्याप्सिकम, कटर, बैगुन, आरु, काँचो आँप, मालपुआ अन्यः तिल, सक्खर, समोसा, परौठा, चाट, पापड, नयाँ चामल, अमिलो तथा मसालेदार खाना, मदिरा, सुख्खा तरकारी, मालपुवा, छोला, राजमा, सोयाबिन, चना, मटर, फास्ट फूड, आइसक्रीम, चिल्लो खाना, अचार, अत्याधिक नुन, कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी उत्पादन, जंक फूड लगायतका अन्य खानेकुरा खानु हुँदैन।
चैत्र २७, २०७७ शुक्रवार १८:२४:१४ बजे : प्रकाशित
अम्बाको पातका फाइदा : फ्लूसँग लड्ने क्षमता वृद्धिदेखि डण्डीफोर हटाउनसम्म
काठमाडौँ। अम्बा नेपालमा पहाड, भित्री मधेश र तराईमा पाइने एक स्वादिष्ट र औषधीय गुणले भरिएको फल हो। यसलाई परापूर्वकाल देखि नै परम्परागत उपचारका प्रयोग गरिने गरिएको छ। विभिन्न अनुसन्धान तथा अध्ययनले पनि यसको फल र पातमा औषधीय गुण भएको पुष्टि गरेको छ।
यसको खेती करिब १५०० मिटरको उचाइसम्म सजिलै गर्न सकिन्छ। नेपालको प्रायः सबै क्षेत्रमा पाईने यस फलमा भिटामिन सी, फाइबर तथा अरु महत्त्वपूर्ण खनिजहरु पाइन्छन् । अम्बाको फलका साथै यसको पात पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । यसका पातमा भएका एण्टीअक्सिडेण्ट, एण्टीव्याक्टेरियल लगायतका गुणहरूले विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य समस्या हल गर्न सघाउ गर्दछ।
नेपाल, भारत, चीन लगायतका अरु थुप्रै देशहरुमा अम्बाको पातको चिया बनाएर झाडापखालाको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ भने मेक्सिको जस्ता अन्य देशहरूमा मानिसहरूले परम्परागत रूपमा अम्बाको फलको बोक्रालाई घाउहरू निको पार्न प्रयोग गर्छन्।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको कृषि विभाग अनुसार १०० ग्राम काँचो अम्बामा ६८ ग्राम क्यालोरिज, १४ दशमलव ३२ ग्राम कार्बोहाइड्रेट, ८ दशमलव ९२ ग्राम सुगर, शुन्य दशमलव ९५ ग्राम फ्याट, ५ दशमलव ४ ग्राम डायट्रि फाइबर, ४१७ मिलिग्राम पोटाशियम, २२८ दशमलव मिलिग्राम भिटामिन ’सी’ र ६२४ अन्तराष्ट्रिय स्तरका भिटामिन ’ए’ लगायतका खनिज तत्वहरु पाइन्छन्।
यसैगरी, अम्बाको पातको चिया बनाएर पिउँदा फ्लूसँग लड्ने क्षमता प्रदान गर्दछ। सन् २०१२ को टेस्टट्यूब अध्ययनका अनुसार अम्बाको पाको चिया फ्लू उपचारका लागि एक एन्टीभाइरल एजेन्टको रुपमा काम गर्छ। यसैगरी, अन्वेषकहरूले चियाले फ्लू हुने भाइरसको बृद्धिलाई रोकेको अध्ययनमा पत्ता लगाएका छन् ।
अम्बाका पातका फाइदा
मधुमेह : अम्बाको पातबाट बनेको चिया सेवन गर्दा मुधमेहबाट पीडित बिरामीहरुका लागि फाइदाजनक हुन्छ । यसको सेवनबाट रगतमा चिनीको मात्रा कम हुन्छ ।
झाडापखालाबाट मुक्ति :अम्बाको पातले झाडापखाला लागेको समस्यालाई निकै सहयोग पुर्याउँछ । ३० ग्राम अम्बाको पात र एक मुठ्ठी चामलको पीठोमा दुई गिलास पानी हालेर उमालेको पानी दिनको दुई पटक पिउँदा झाडापखालाबाट मुक्ति पाइन्छ।
तौल घटाउन : अत्याधिक तौल भएका व्यक्तिहरु लागि अम्बाको पातले वजन घटाउन निकै सहयोग गर्छ। यसले कार्बोहाइड्रेटमा पाइने स्टार्चलाई चिनीमा बदलिने प्रक्रियालाई रोक्छ जसबाट तौल घटाउन मद्दत पुग्दछ ।
पाचन प्रणालीमा सहयोगी : अम्बाको पात खाँदा खाना नपच्ने समस्याबाट छुटकारा पाइन्छ । यी पातले डाइजेष्टिभ इन्जाइमलाई बढाएर खाना पचाउन मद्दत गर्दछन् ।
मुटुको लागि फाइदाजनक : अम्बाको पातको चियाले मुटु लाई पनि फाइदाजनक गर्दछ। यसले रगतमा भएको नराम्रा क्लोस्ट्रोलको मात्रालाई कम गराउँदै मुटुलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ।
कपालका लागि : अम्बाको पातको अर्को गुण यसले कपाल बलियो बनाउनुका साथै छालालाई पनि राम्रो बनाउँदछ। यसका लागि अम्बाको ताजा पातको रस पिउनु उपयुक्त मानिन्छ ।
ऐलर्जीका लागि : अम्बाको पातमा कुनै पनि प्रकारका ऐलर्जीको समस्यालाई निर्मुल पार्ने औषधीय गुणहरु पाइन्छन्।
डण्डीफोर हटाउन : अम्बाको पातमा एण्टीसेप्टिक गुण पाइने हुनाले डण्डीफोर हटाउन पनि मद्दत गर्दछ । यो समस्या भएकाले नियमित अम्बाको ताजा पातहरूलाई पिसेर डण्डीफोर भएको ठाउँमा लगाउँदा समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ।
चैत्र २७, २०७७ शुक्रवार १२:३७:४२ बजे : प्रकाशित
# अम्बाको पात
बहुपयोगी तितेपातीका फाइदा : डिप्रेसनबाट मुक्त गराउनदेखि शारीरिक ऊर्जा वृद्धिसम्म
काठमाडौँ। तितेपाती नेपालमा पाइने एक किसिमको जडिबुटी हो। यसको उपयोग जडिबुटीका रूपमा र अत्तर निर्माणको लागि प्रयोग गरिन्छ । साथारणतया, जहाँ पनि हुर्कने यस वनस्पति कहिले काहीँ नेपाली किसानहरू आफ्ना पशुहरूका लागि घाँस या सोत्तरको रूपमा पनि प्रयोगमा ल्याउने गर्दछन् । नेपालमा तितेपातीलाई धार्मिक कार्य, पितृ कार्यमा पनि प्रयोग गरिन्छ।
खोटाङको पाथेकामा तितेपातीबाट सुगन्धित तेल निकाल्न उद्योग स्थापना गरिएको । नेपाली वनजंगलमा तथा खेतबारीमा सहजरुप पाइने र औषधीय गुण बोकेको यो वनस्पतिलाई औषधीको राजा पनि भन्ने गरिन्छ।
तितेपातीलाई अंग्रेजीमा मगवर्ट भनिन्छ भने यसको वैज्ञानीक नाम अर्टिमिसिय भल्गरिस हो। यसको पात, फूल तथा जरा सबैमा औषधीय गुण हुन्छन्। मध्ययुगमा थकानबाट छुटकारा पाउन पनि तितेपातीको प्रयोग गरिन्थ्यो। त्यसैगरी, कुनै लामो गन्तव्य हिँड्ने समयमा यसको बोटलाई खुटामा बाँधेर र वा जुत्ता भित्र घुसाएर हिँडिन्थ्यो। आधुनिक अनुसन्धानमा तितेपातीमा इनुलिन, ट्यानिन, अत्यावश्यक तेल सिनेलोल, रेजिन, तितो पदार्थ र थुजोनजस्ता पाइने तत्वले गर्भाशयलाई मजबूत गर्दछ।
तितेपातीका औषधीय गुणहरु
– तितेपातीको चिया बनाएर पिउँदा केन्द्रीय स्नायु प्रणाली आराम गर्नुका साथै अनिन्द्राको समस्यामा पनि प्रभावकारी हुने गरेको प्रमाणित भएको छ।
– तितेपातीले पाचन स्वास्थ्यलाई पनि मजबुत बनाउने गर्दछ। पाचन प्रणाली सम्बन्धी हुने समस्या पखाला लाग्ने, कब्जियत भएको, भोक नलाग्ने, जुका तथ्य अन्य परजीविबाट संक्रमण भएको, वान्ता आउने र कलेजोको बिकार समेतमा यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले भारी भोजन पचाउन पनि मद्दत गर्दछ।
– यसको जरालाई मानिसहरूले टोनिकका रुपमा ऊर्जा वृद्धि गर्न प्रयोग गर्ने गर्छन्। त्यसैगरी महिलाहरुले यसलाई अनियमित महिनावारीमा वा महिनावारीमा समस्या भएको बेला प्रयोग गर्न सक्छन्। यद्यपि, यसको प्रयोग र उत्तम प्रभावकारी नतिजा प्राप्त गर्न आयुर्वेदिक चिकित्सकसँग परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ।
– तितेपातीको तेलले एन्टिडिप्रेसेन्टको काम गर्दछ। यसले मस्तिष्क शान्त बनाइ मानसिक तनाव, डिप्रेसन र चिन्ताबाट पनि छुटकारा पाउन सकिन्छ।
– खेतबाट बालीलाई भित्र्याउनु अघि भण्डारण गर्नुपरेमा यसबाट बनेको औषधी छर्केर राख्दा कुनै किसिमका घुन या कुरा नपर्ने किसानहरु विश्वास गर्छन्।
– तितेपातीका फूल र पात मांसपेशीहरू च्यातिएको, फर्किने, सट्किनेका लागि पनि उपयोगी हुन्छ। यसैगरी, यसको फूल दमरोग, पीडादायी महिनावारीमा पनि प्रभावकारी हुन्छन्।
– मधुमेह भएकाले यसको जराको धुलोलाई दैनिक सुत्नु अघि पानीमा मिलाएर पिउँदा सुगर रोगलाई केहि हदसम्म निर्मूल गर्न मद्दत गर्दछ।
चैत्र २६, २०७७ बिहिवार १३:०९:१४ बजे : प्रकाशित